दलहरुको दौडाईले कोरोना संक्रमणको खतरा | ABC KHABAR
Home बिचार दलहरुको दौडाईले कोरोना संक्रमणको खतरा
खोटाङमा अहिले निकै ठुलो चालढालका साथ राजनीतिक दलको प्रशिक्षण भेलाहरु चलिरहेका छन् । गाउँ गाउँमा पुगेर नेताहरुले आफ्नो बलबुत्ताले भ्याएसम्म कार्यकर्तालाई उक्साईरहेका छन् । यताकाले उता तान्ने उताकाले यता तान्ने भ्याए सम्मको तागतले उनिहरु जोडबल गरिरहेका छन् । कोरोनाको कहर छ भन्दै भेला र प्रशिक्षण चलाईरहँदा जोखिम घट्ला त ? सर्वसाधरण नागरिकहरु भने डराई रहेका छन् । राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरुकै कारण कोरोनाको संक्रमण बढेमा कसरी नियन्त्रण हुन्छ होला भन्ने जिज्ञासा सुन्न थालिएको छ ।
चुनावी ताकाको झल्को दिने गरि दलहरुले दलबल लिएर गाउँ गाउँमा दौडि रहेका छन् । यसरी दौडाहाा गर्न थालेपछि जिल्लामा कोरोनाको जोखिम निकै बढेको छ । केही समय अगाडि नेपाली काँग्रेस खोटाङले दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–४ बतासेमा एक भव्य कार्यक्रम नै ग¥यो । काँग्रेसले बतासेमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का पूर्व गाविस अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र राई लगायतलाई पार्टीमा प्रवेश पनि गरायो । यो भेलामा हेर्दा सामाजिक दुरी कुन चरीको नाम हो कसैले यसको प्रवाह गरेनन् । स्वंय गाउँ पालिका प्रमुख उपप्रमुख समेत हाजिर भएका कार्यक्रममा कोरोनाको कुनै कहर भए जस्तो लागेन ।
यस्तै यसको प्रतिउत्तरमा भदौ २७ गते नेकपा खोटाङले पनि दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–११ खार्मीमा बतासेको बदला लिनेगरी अर्को कार्यक्रम ग¥यो । खार्मीमा भएको कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादीका केही दर्जन कार्यकर्तालाई नेकपाले पार्टी प्रवेश गरायो । याहाँपनि कोरोनाको संक्रमण हुने खतराको कुनै प्रवाह गरिएन नेकपा ठुलै नेताहरु सहभागी भएको कार्यक्रममा जिल्ला सदरमुकाममा माक्स खोई कार्यक्रम चलाईरहेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको मेयर उपमेयर दुईजना नै सहभागि थिए । कार्यक्रमपछि सामाजिक संजालहरुमा राखिएको तस्विर हेर्दा यता पनि सामाजिक दुरी कायम गरिएको पाईएन ।
जनता समाजवादी खोटाङले समेत केही समय अगाडि हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका आन्तरिक कार्यक्रम ग¥यो । कार्यक्रममा सरकारका कडा आलोचना गर्ने जनता समाजवादीका केन्द्रिय सदस्य मदन राई लगायतको नेताहरु उपस्थित थिए । त्यहाँ भएको भेलामा पनि सामाजिक दुरी कायम गरेको देखिएन । कोरोनाको जोखिम न्युनिकरणको उपायहरु अवल्म्बन गरिएको पाईएन । यी र यस्ता दृष्यहरु अहिले प्रत्येक गाउँ तथा टोलहरुमा छयास छयास्ती देखिन थालिएका छन् ।
अझ सरकारले अहिले एक कदम अगाडि जोखिम मोलेर सवारी साधन संचालन गर्न लागेको छ । यस्तो बेला उच्च सावधानी अपनाएर मात्र सवारी संचालन गर्न ५० प्रतिशत मात्र यात्रु राखेर सवारी चलाउन प्रशासनले आग्रह गरेको छ । यसलेपनि खास कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्ला भन्ने लाग्दैन ।
कोरोना भाइरसको महामारीकाबीचमा पनि नेकपा र काँग्रेसले जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा चुनावी शैलीमा पार्टीगत कार्यक्रमहरु बिना सावधानीपूर्वक गरिरहेका छन् । एकातर्फ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढिरहेको छ, अर्कातर्फ राजनीतिक दलबीचमै जानाजान भीड जम्मा गरेर कार्यकर्ता तानातान गर्ने होडबाजी चलिरहेको छ । ठुला र जिम्मेवार भनिएका दलहरुले नै भिडभाड गराउनु जायज नै होला र ? प्रश्नहरु उब्जिएका छन् ।
सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दी खुलेपछि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्ने खतरा बढेको देखिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सजगता अपनाउन आग्रह गरेको थियो । न्यूनतम भौतिक दूरी कायम गर्न, मास्क लगाएर हिँड्न, अनावश्यक भिडभाड नगर्न, सेवा प्रदायक निकाय वा संस्थालाई स्वास्थ्य र सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्ड पालना गर्न÷गराउन भनिए पनि बेवास्ता भइरहेको छ ।
पार्टीगत कार्यक्रममा मात्र नभई जिल्लामा हुने अधिकांश कार्यक्रममा हेलचक्र्याइँ बढ्दो देखिएकाले सावधानी अपनाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण जिल्ला समन्वय समितिले समेत आग्रह त गरेको छ । तर त्यही जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरु पार्टीको कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुन पुग्ने गरेका छन् । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमबाट बच्न विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने यो बेला अधिकांश क्षेत्रमा हेलचक्र्याइँ गरिएको छ । अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न कुनै खास कुनै किसिमको औषधीहरु समेत बनि सकेको छैन । यस्तो बेला यो भाईरसको संक्रमणबाट जोगिने विकल्प उच्च सावधानी मात्र भएकाले हरेक ठाउँमा सावधानी अपनाउन पर्दछ ।
पछिल्लो समय जिल्लामा स्वास्थ्य र सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्ड पालना गर्न बेवास्ता गर्न थालिएको छ । न्यूनतम दुई मिटर भौतिक दूरी कायम गर्न र अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्न भनिए पनि सोको पालना हुन सकेको छैन । यसले के देखाउँदै छ भने अब कोरोना भाईरसको संक्रमण प्रत्येक टोल वस्ती र घरहरुमा छिर्न सक्दछ । यसले ढिलो चाँडो सबैलाई भेट्ने खतरा बढेको छ । यसकालागि बेलैमा सचेत रहन र न्युनतम सावधानी र सर्तकता अपनाउन नै आजको आवश्यकता हो । सबैलाई चेतना खुलोस ।
Previous articleकोरोना संक्रमणबाट जोगाउन प्रहरीलाई फेस सिल्ड वितरण
Next articleसंक्रमण सँगै देखिएको पत्रकारीता भित्रका साझा संकट